Ciidammada Xoogga oo kaabiga ku haya Baraawe |
Ciidammada Xoogga oo kaabiga ku haya Baraawe
Viagra soft FRUIT for sale, cheap clomid. Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehliyaan ciidammada AMISOM ayaa gacanta ku dhigay deegaanno iyo tuulooyin cusub oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo ay ciidammadu kaabiga ku hayaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya Ciidammada nabad-ilaalinta Midowfa Africa ee AMISOM, ayaa malleeshiyaadka Al-Shabaab ka qabsaday Tuullada Maryan-gubaay iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo ciidammada ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ayaa warbaahinta Qaranka u xaqiijiyey in deegaannada ay gacanta ku dhigeen ay yihiin kuwa hadda ay xaaladooda degan tahay, isla markaana dadka Shacbigana ay soo dhoweeyeen ciidammada meelahaasi la wareegay.
Tuulada Maryan-gubaay ayaa ku dhow magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, malleeshiyaadka Al-Shabaab ee magaaladaasi ku suganna waxaa la soo sheegayaa in ay ka sii cararayaan, iyadoo ay ka u ruqaansadeen dhanka gobolka Jubbada Dhaxe.